Semalt Islamabad Expert: Ahoana no hamoronana votoaty ho an'ny SEO?
Raha vaovao amin'ny media sosialy sy fikarakarana fikarohana ianao, dia mety tsy ho henonao ny votoatin'ny SEO sy ny dikany amin'ny Internet. SEO dia manondro ny fikarohana fikarohana fikarohana. Izany no fomba fampivoarana bilaogy iray na tranokala iray mba hahafahan'ny mpitsidika mahita azy amin'ny alàlan'ny Google, Bing, Yahoo ary ny fitaovam-pikarohana hafa. Amin'ny votoaty dia midika fa ny fampahalalana hita ao amin'ny aterineto dia mety ho levona amin'ny tranokala samihafa mba hamoronana lahatsoratra manokana. Rehefa mametraka ireo zavatra roa ireo isika, dia fantatsika fa ny votoatin'ny SEO dia natsangana tamin'ny tanjon'ny fandraisana mpitsidika bebe kokoa ary ny fampisehoana ny fisainan'ny milina fikarohana.
Michael Brown, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt , mizara zavatra sasantsasany mba hahatsiarovan-tena amin'ny fanatsarana ny votoatin'ny SEO:
Raha mbola vaovao amin'ny fanatsarana ny milina fikarohana ianao, dia nanangona lisitr'ireo zavatra tokony ho tsaroanao mba hanatsarana ny votoatin'ny SEO ianao.
Raha mikasa ny hampahafantatra ny fifamoivoizana amin'ny alalan'ny Google, Bing, ary Yahoo ianao, dia tokony hanao fikarohana momba ny teny filamatra mety, alohan'ny hanoratanao zavatra ho an'ny tranonkalanao. Amin'izany fomba izany, dia ho afaka hifantoka amin'ny teny fototra sasantsasany ianao ary hahalalaza hoe iza amin'izy ireo no mikaroka indrindra. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia azontsika atao ny milaza fa tokony hanoratra lahatsoratra manan-danja manan-danja ianao, saingy tsy azo avela amin'ny fandaniana rehetra izany.
Tokony ho fantatrao ny toerana sy ny fomba ahafahanao mampiasa teny sy fehezanteny ao amin'ny lahatsoratrao mba hahitana fahita amin'ny Internet.
Zava-dehibe ny mandamina ny votoatinao amin'ny fomba lojika sy mahomby. Tsy tsara ho an'ny SEO ao amin'ny tranokalanao, fa manampy ny mpitsidika hahita ny tranonkalanao sy ny lahatsoratra mora fotsiny.
Tokony hifantoka amin'ny fampitomboana ny fahitana ny votoatinao ianao amin'ny fizarana azy amin'ny Facebook, Twitter, LinkedIn ary sehatra hafa. Ataovy azo antoka fa manorina rohy ianao ary miezaka ny mampihena ny taham-pifandraisana amin'ny tranokalanao araka izay tratranao. Ny fitaovan'ny fikarohana fikarohana toy ny Keyword Niche Finder dia afaka manampy anao hamantatra lohahevitra sasany mba hahafahanao mifantoka amin'ny votoatin'ny SEO araka ny tokony ho izy.
Fantaro ny tanjonao
Zava-dehibe ny mamaritra ny tanjonao ary miezaka ny hampiasa ny votoatin'ny kalitao. Amin'izany fotoana izany koa, tokony hampiasa teny fanalahidy mety ianao ary hahalalanao ny fomba hampiverenana ny mpitsidika ho mpanjifalambao mahafaly sy miverina. Noho izany dia tokony hanome lanjany ny karoka fitadiavana ianao ary tsy tokony hamoaka votoaty kely izay mahazo klioketsa ary laharana fa tsy sarobidy ho an'ny mpitsidika sy ny motera fikarohana. Ny mety hitranga dia hampitsahatra ny tranokalanao Google noho ity votoaty malefaka ity
Ahoana ny fampivoarana ny tetikasanao votoatin'ny SEO
Raha toa ka manoratra amin'ny votoatiny ianao ary manantena fa hisondrotra avo lenta amin'ny valin'ny fikarohana (motera) , dia manao fahadisoana lehibe ianao. Voalohany indrindra, tokony hamaritra ny tanjon'ny tranokala na blôgy ianao ary azonao antoka fa manamboatra paikady handroahana ny varotra ianao. Azo atao izany raha fantatrao ny zava-drehetra momba ny mpihaino anao. Ny fanadihadiana sy ny programa fanadihadiana dia hanampy anao hahazo ny sary tsara indrindra amin'ireo mpitsidika sy mpanjifanao. Afaka mampitombo ny fifamoivoizana eo amin'ny tranonkalanao ianao amin'ny fametrahana ny teny fanalahidy fototra amin'ny lohateny. Amin'ny alalan'ity resaka ity dia azo atao ny manatanteraka ny fahombiazany amin'ny aterineto ho mpandraharaha na mpitoraka blaogy, fa noho izany dia mila manatsara ny votoatin'ny SEO ianao Source .